‘अब कोरोना संक्रमण र मृ'त्युदर घट्दै जान्छ’ -डा. शेरबहादुर - Sidha News
‘अब कोरोना संक्रमण र मृ’त्युदर घट्दै जान्छ’ -डा. शेरबहादुर
काठमाडौं उपत्यकामा यतिबेला कोरोना भाइरसको दर उच्च विन्दुमा पुगेको तर अबका दिनमा संक्रमण घट्ने उहाँको भनाइ छ । निषेधाज्ञा अगाडिको भीडभाड र जमघटका कारण कोरोना भाइरसको संक्रमण दर अहिले उच्च भएको तर अहिले निषेधाज्ञा जारी रहेकाले कोरोना संक्रमण दर घट्दै जाने उहाँको ठहर छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले कोरोना संक्रमण दरलाई अधिकतम विन्दु मान्न सकिन्छ, निषेधाज्ञाअगाडि मानिसहरु मिसमास भए ।
भीडभाड र जमघट भयो, त्यसैले कोरोना संक्रमणको दर उच्च भएको हो । उहाँहरुले घरघरमा लगेर संक्रमण थप बढाउनुभयो । त्यही कारण कोरोनाले अहिले क्षमता प्रदर्शन गरिहेको हो । तर अब निषेधाज्ञा जारी छ र संक्रमण दर घट्दै जानेछ ।’ अहिले निषेधाज्ञाका कारण सामाजिक सम्पर्क नहुँदा पनि बढ्नुलाई पहिल्यैको गतिविधिसँग जोडेर हेर्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ । पहिले सुरुवाति समयमै तरिका नपुगेका कारण अहिलेको यो अवस्था भोग्नु परेको बताउदै उहाँले अहिले भने हेर्नु बाहेक अन्य विकल्प नहुने उहाँको भनाइ छ ।
संक्रमितमध्ये २ प्रतिशतकाे मृ’त्यु
डा पुनले अहिले नेपालमा संक्रमितमध्ये २ प्रतिशतकाे मृत्यु हुने गरेकाे बताउनुभयाे । संक्रमितको अनुपात यस्तै स्थिर रहेमा मृत्युदर पनि घट्न सक्ने डाक्टर पुनले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संक्रमितको दर अहिले स्थिर छ । यसलाई राम्रो भन्न सकिन्छ । मृ’त्युदर पनि करिब-करिब २ प्रतिशत छ । धेरै परिवारका सदस्य संक्रमित भइसक्नुभएको छ । तर स्ट्रिक्ली यसरी नै गरियो भने त्यो पनि घट्न सक्छ । अब संक्रमित हुने ठाउँ त्यति छैन ।’
संक्रमितभन्दा पनि मृ’त्युको प्रतिशतले महत्व राख्ने उहाँको भनाइ छ । समाज तथा परिवारमा कोरोना संक्रमण भए पनि आफूलाई सामान्य केही भएको परीक्षण गराउदिनँ भनेर घरमै बस्ने गरेकोले परीक्षण गरेकाहरुको संक्रमण प्रतिशतले त्यति महत्व नराख्ने डाक्टर पुनले बताउनुभयो । तर घरमा बस्नै नसक्ने र संंक्रमणले जटिल अवस्थामा पुगेपछि मात्रै अस्पताल आएर परीक्षण गराउँदा मृत्युसम्म हुने भएकोले उनीहरुको तथ्याङ्कले भने महत्व राख्ने उहाँको भनाइ छ ।
डा पुन भन्नुहुन्छ, ‘संक्रमितको दर अहिलेको भन्दा बढी पनि होला । परीक्षण गराउन नआएर त हो । संक्रमितको दरले केही मान्यता राख्ला तर म के भन्छु भने संक्रमितभन्दा पनि मृत्युको प्रतिशत महत्वपूर्ण लाग्छ । किनभने कोही मानिसहरु जटिल भयो भने घरमा भन्दा अस्पताल आउन चाहन्छ । कति प्रतिशत मृ’त्यु भयो भन्ने त्यसबाट देखिन्छ । तर कोही मान्छे संक्रमित भयो भने सबै परिवारले परीक्षण गर्ने अवस्था छैन ।
कोही मलाई केही भएको छैन, सामान्य केही मात्रै भएको भनेर परीक्षण गराउँदैनन् । उता मृत्युचाहिँ बाध्यता हो । उसलाई संक्रमणले च्यापेर अस्पताल पुग्न बाध्य बनाएको हुन्छ ।’